Renirano Faritra atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany: Manomboka midina
mercredi, 10 janvier 2018 10:24
Reniranon'i Manapatrana ao Farafangana: 2.14m ny haavon’ i Manapatrana eo amin’ny mari-drefin’i Manambotra. Nidina 0.36m ny rano tao anatin’ny 24 ora ary mbola hidina mandritry ny 24 ora manaraka. 3 m ny refy fanairana milaza loza manambana. Tsy tratra ny fetra amin’ny loza manambana (loko manga).
Miotra ny 8m ny haavon’i Manapatrana eo amin’ny mari-drefin’i Mahafasa. Nidina ny rano tao anatin’ny 24 ora ary mbola hidina mandritry ny 24 ora manaraka. 4,5m ny refy fanairana milaza loza manambana (loko mena).
Reniranon'i Mananjary ao Mananjary: 1.55m ny haavon’i Mananjary eo amin’ny mari-drefin’i Tsaravary. Nidina 2m ny rano tao anatin’ny 24 ora ary mbola ho vinavinaina hidina ao anatin’ny 24 ora manaraka. 3, 00 m ny refy fanairana milaza loza manambana. Tsy tratra ny fetra amin’ny loza manambana (loko manga).
Reniranon i Matitanana ao Vohipeno: Miotran’ny 8m ny haavon’i Matitanana eo amin’ny mari-drefin’Andemaka. Nidina ny rano tao anatin’ny 24 ora ary mbola hidina mandritry ny 24 ora manaraka. Efa tratra ny fetra amin’ny loza manambana (loko mena).